पूर्वराजाहरुले प्रयोग गरेको श्रीपेचको मूल्य कति ? – Kavrepati
Home / समाचार / पूर्वराजाहरुले प्रयोग गरेको श्रीपेचको मूल्य कति ?
admin September 25, 2021	समाचार Leaveacomment 34 Views
काठमाडौं । शुक्रबार नारायणहिटी संग्राहलयमा राखिएको श्रीपेच चोरीको प्रयास भयो। हुन त पक्राउ परेका आरोपीले श्रीपेच लगाएपछि राजा हुन्छु भनेर श्रीपेच राखेको शोकेस फुटाउन खोजेको बयान दिए।
यहाँ हामी उक्त श्रीपेचको मूल्य कति पर्छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौं। नेपालमा कुनै समय राजाहरुको शासन थियो। तर, गणतन्त्रपश्चात् जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्छन्। तर, नेपालमा शाहवंशीय राजाहरुको शासन सकिएको वर्षौं हुँदापनि यसबारे बहस चलिरहेको छ।
उक्त समयमा बन्द कोठामा राखिएसँगै त्यसलाई नेपाल सरकारले असुरक्षित हुने महशुस गर्दै बिमा गर्ने प्रक्रियाअघि बढायो। तर, मूल्य तय हुन नसक्दा श्रीपेचको बिमा गर्ने काममा अवरोध आयो।
‘यो एकदमै बहुमूल्य वस्तुबाट बनेको छ, यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्न अति नै आवश्यक देखिन्छ,’ एक संस्कृतिविद् भन्छन्।
Previous केटीहरु बासई हेरेर नै उनीहरु भर्जिन छ कि छैन भनेर था हुन्छ, कसरी थाहा पाउने?
Next बिवाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतीले एकपटकपनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले छोडे संसार